Ny lamina famatsiana sy ny fangatahana dia tohanana tsara, ary matanjaka ny fiovaovan'ny vidin'ny aluminium amin'ny fotoana fohy
Tube / fantsona aluminium
Tube / fantsona aluminium Square
Aluminum disc / boribory
Betsaka ny gazy karbonika novokarina nandritra ny famokarana aluminium electrolytique. Tsy mifanaraka amin'ny toe-tsaina "neutre neutralité" sy "peking carbone" naroson'ny mpitondra sinoa tamin'ny taon-dasa izany. Amin'ny hoavy rehefa mihamitombo ny fiarovana ny tontolo iainana, dia hisy fiantraikany amin'ny fandrosoan'ny famokarana aluminium electrolytic. Mandritra izany fotoana izany, ny indostrian'ny angovo vaovao dia mahazo saina bebe kokoa noho ny fiarovana ny tontolo iainana. Nitombo ny fangatahana aluminium ambany. Ny lisitra ambany amin'izao fotoana izao dia manondro ihany koa fa tsara ny lamina famatsiana sy fangatahana amin'ny tsena aluminium. Ny fiovaovan'ny vidin'ny aliminioma amin'ny fotoana fohy dia andrasana ho matanjaka, ary asaina mandinika ny fanaraha-maso Politika mifandraika amin'ny fitantanana mba hahazoana antoka ny famatsiana sy ny fanamafisana ny vidiny.
Be dia be ny entona mandatsa-dranomaso avoaka mandritra ny famokarana aluminium electrolytic, ary ny politika dia mametra ny famokarana aluminium electrolytic.
Ao amin'ny fireneko, ny ankamaroan'ny aluminium electrolytika dia novokarina tamin'ny alàlan'ny famokarana herinaratra mafana. Amin'ny ankapobeny, ny famokarana herinaratra mafana dia mamokatra herinaratra amin'ny fandoroana saribao mafana (854, -2,00, -0,23%), ary ny saribao mafana dia hamokatra gazy karbonika be dia be mandritra ny dingan'ny fandoroana, izay manimba ny tontolo iainana. Mahatonga loza. Amin'izao fotoana izao, any Shandong, Inner Mongolia, ary Xinjiang ny fahafahan'ny famokarana aluminium electrolytique an'ny fireneko. Ny vidin'ny herinaratra ambany any Avaratra-Andrefana dia nahasarika be dia be ny fahafaha-mamokatra aluminium electrolytique mba hamindra ny lasa. Na izany aza, eo ambanin'ny fitarihan'ny "tsy miandany amin'ny karbônina" sy ny "peking karbôna", dia navoaka tamin'ny toerana maro ny fepetra fanaraha-maso roa sosona fanjifana angovo, toy ny Inner Mongolia, Ningxia, Guangdong, sns., izay hampiadana ny hafainganam-pandehan'ny aluminium electrolytique fahaiza-mamokatra. Vao haingana, ny "Fampandrenesana momba ny fanamafisana ny fitantanana ny tetikasa "Avo roa" navoakan'ny Birao Foiben'ny governemantan'ny vahoaka ao amin'ny faritanin'i Shandong dia nanambara mazava tsara fa tokony hatsangana ny tetikasa "avo roa" vaovao sy ny fampihenana ny fahafaha-mamokatra, ny fanjifana arina. , ny fanjifana angovo, ny famoahana karbaona ary ny famoahana loto dia tokony hampiharina amin'ny fomba hentitra. Rafitra hafa. Ny loharanom-baovao hafa amin'ny fampihenana dia tokony ho azo jerena, azo jerena ary azo jerena, raha tsy izany dia tsy azo ampiasaina ho loharano hafa. Raha resaka fanoloana fampihenana ny fahaiza-manao, ny tetikasa aluminium electrolytic dia tsy latsaky ny 1: 1.5. Raha ny fampihenana ny fanjifana angovo, ny tahan'ny fanoloana ny aluminium electrolytic dia tsy latsaky ny 1: 1.5. Raha ny fanoloana ny fampihenana ny entona karbaona, ny aluminium electrolytic dia tsy latsaky ny 1: 1.5. Toerana maro no nanomboka nanamafy ny "fanaraha-maso roa", ary hisy fiantraikany amin'ny famokarana ny famokarana aluminium electrolytique.
Avy amin'ny fomba fijery ny vidiny, ny vidin'ny alumina sy ny vidin'ny herinaratra no tena akora ho an'ny electrolytic aluminium, ary ny vidiny dia mety ho 35% ny vidin'ny famokarana ny electrolytic aluminium. Raha ny momba ny alumina, satria ny fanavaozana ny lafiny famatsiana dia tsy misy alumina, dia tsy nisy fiantraikany ny fanitarana ny fahafaha-mamokatra alumina. Na izany aza, ny vidin'ny aluminium electrolytic amin'izao fotoana izao dia avo, ary ny fangatahana alumina avy amin'ny smelters aluminium electrolytic izay afaka mamokatra dia somary matanjaka. Noho izany, ny tsenan'ny alumina dia ao anatin'ny toetry ny famatsiana kely amin'izao fotoana izao, ary ny vola handraisana anjara amin'ny alumina dia somary voafetra ihany, ka ny alumina dia hanohy hiasa amin'ny ambaratonga ambany ao anatin'ny fotoana fohy.
Raha ny momba ny saribao mafana dia tsy ny saribao mafana ihany no takiana amin'ny famokarana aluminium electrolytique, fa amin'izao fotoana izao dia miditra amin'ny fahavaratra ny firenena, niakatra be ny mari-pana, ary nitombo ny fangatahana herinaratra, izay nanosika ny vidin'ny saribao mafana. mitsangana. Tamin'ny 24 Jona, 990 yuan ny vidin'ny saribao mafana. / Ton, amin'ny haavo avo mandritra ny taona. Ny vidin'ny arintany mafana mahery dia hampitombo ny vidin'ny famokarana aluminium electrolytique, ary misy fanohanana eo ambanin'ny vidin'ny aluminium.
Mitohy mihena ny tahiry, azo ekena ny fangatahana ambany
Ny fanjifana aluminium electrolytic dia mifantoka indrindra amin'ny indostria toy ny trano fonenana, fiara ary kojakoja an-trano. Raha jerena ny angon-drakitra, dia nitohy nihatsara ny zava-bitan'ny taratasin'ny fananan-tany, ary ny fitomboan'ny isan-taona amin'ny angon-drakitra momba ny famokarana sy ny varotra dia mbola lehibe. Ny fitaovana an-trano dia nitazona ny tahan'ny fitomboana tsara isan-taona eo amin'ny lafiny famokarana, fivarotana ary fanondranana. Azo jerena fa nihena ny tahan'ny fitomboana isan-taona amin'ny angon-drakitra mifandraika amin'ny indostrian'ny terminal aluminium. Izany dia mampiseho fa ireo indostria ireo dia manala tsikelikely ny fiantraikan'ny valan'aretina amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny taon-dasa, saingy miverina tsikelikely amin'ny tahan'ny fitomboana ara-dalàna isan-taona. Mbola mila fotoana voafetra ihany izany. Noho izany, ao anatin'ny fotoana fohy dia antenaina fa hitohy tsara ny fanjifana amin'ny terminal aluminium.
Ireo indostria voalaza etsy ambony ireo dia filàna mahazatra amin'ny aluminium. Tamin'ity taona ity, satria nitombo tsikelikely ny fahatsiarovan'ny olona ny fiarovana ny tontolo iainana, dia nitombo hatrany ny indostrian'ny angovo vaovao. Miroborobo ny indostria toy ny fiara mitondra angovo vaovao, photovoltaics ary herin'ny rivotra. Ny fiaran'ny angovo vaovao dia manenjika lanja maivana, ka amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny alimo ny vatany. Ny rafitry ny sela photovoltaic dia vita amin'ny firaka aluminium. Aluminum koa dia ampiasaina amin'ny faritra maro amin'ny rivodoza izay miteraka electrophoresis. Amin'ny ankapobeny, ny politika "tsy miandany amin'ny karbônina" dia tsy manakana ny dingan'ny fametrahana ny fahafaha-mamokatra aluminium electrolytique, fa manitatra ihany koa ny teboka fanjifana amin'ny aluminium electrolytic.
Raha ny momba ny fanisana ara-tsosialy, hatramin’ny 24 jona, araka ny antontan’isa, dia 874.000 taonina ny fanisana ara-tsosialy momba ny aluminium electrolytique amin’ny toerana dimy, izay nihena 16.000 taonina raha oharina tamin’ny herinandro lasa teo. 722.000 taonina ny fanisana tamin’io vanim-potoana io tamin’ny taon-dasa. Ny tahiry amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny ambaratonga faha-3 ambany indrindra ao anatin'ny fe-potoana mitovy amin'ny 5 taona. Ny haavon'ny famoriam-bola ho avy dia taratry ny toe-javatra tsara amin'izao fotoana izao amin'ny famatsiana sy ny fangatahana aluminium.
Ny vidin'ny aluminium dia mijanona ho matanjaka. Ho fanampin'ny fiantraikany anatiny, dia manana fifandraisana manokana amin'ny liquidity any ivelany ihany koa izy. Voan'ny valan'aretina, namoaka andiana politika famporisihana ara-toekarena i Etazonia nanomboka ny telovolana voalohany tamin'ity taona ity. Ampy ny liquidity manerantany. Izy io dia vokatra misy vidiny manerantany. Noho izany, miaraka amin'ny liquidity malalaka, ny vidin'ny aluminium dia hiakatra ho azy. Na izany aza, ny fanamafisana ny vidim-bokatra hatrany amin’ny tapany voalohany amin’ity taona ity dia nampiakatra be ny vidim-pamokarana ho an’ny orinasa madinika sy salantsalany ao an-toerana, ary nihena ny tombony azony. Nisarika ny sain’ny tompon’andraikitra mpanara-maso izao toe-javatra izao. Nanomboka ny 12 mey dia niresaka matetika momba ny tokony hitazomana ny famatsiana sy ny fitoniana ny vidin-javatra ny tompon'andraikitra ambony, ary amin'ny ankapobeny dia niverina indray ny entana betsaka.
Raha fintinina, ny "tsy miandany amin'ny karbônina" sy ny "peking karbôna" dia tsy nanakana ny famotsorana ny fahafaha-mamokatra aluminium electrolytique, fa niteraka fangatahana vaovao ho an'ny aluminium electrolytic. Amin'izao fotoana izao, ny fanisana ny aluminium electrolytique dia mbola ambany ary azo ekena ny fototra. Ny vidin'ny aluminium dia andrasana Mahery ny volatility amin'ny fotoana fohy, ary manahy izahay raha mety ho tapaka indray ny tsipika 19200. Amporisihina ny orinasa mifandraika amin'izany mba hanao asa tsara amin'ny fitantanana ny risika, ary miaraka amin'izay koa, ilaina ny mandinika ny politika mifandraika amin'izany izay noraisin'ny manampahefana mifehy mba hiantohana ny famatsiana sy ny fanamafisana ny vidiny.
Fotoana fandefasana: Jun-25-2021
Adiresy: No. 66-6, Shanshui Road, Eastern Industrial New Town, Ancheng Town, Pingyin County, Jinan, Shandong, Shina.
Telefaonina: +86 15169199679